Bandow afar maalin ah oo ka dhaqan galay xerada xalane | KEYDMEDIA ENGLISH
Bandow afar maalin ah oo ka dhaqan galay xerada xalane
Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ayaa ka dhici doonta, teendhada ciidanka Cirka ee Afisyooni, kadib markii kulamadii ugu danbeeyay ee ka dhacay Villa Hargaysa, si ula kac ah, loo carqaladeeyay fadhiyadii Golaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ayaa howl-gal lagu xaqiijinayo amniga Xerada Xalane, maanta billaabaya, kaasoo uu qeyb ka ayhay bandow socon doona 25ka ilaa 28ka April 2022.
U-jeedka ayaa ah in la adkeeyo nabad-galyada Xerada oo xurun u ah, wakiillada shisheeye, kuna yaallaan xafiisyo, saldhigyo iyo xerada Ciidankii Cirka Afisiyooni oo lagu dooranayo Guddoonka Baarlamaanka 11aad JFS.
Sida ku cad war ka soo baxay ATMIS, go’aankaan ayaa yimid kadib la tashiyo kala duwan hoggaanka howl-galku la yeeshay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed X. Rooble, oo ga’aanka qeyb ka ah.
“Si guud xiritaanka xerada waxay keenaysaa joojinta dhammaan shaqada dhismaha iyo ganacsiga ee shaqaalaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah labadaba”, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Howlgalka Midowga Afrika.
Go’aanka doorashada Guddoonka Aqalka hoose, loogu soo wareejiyay Afisyooni, ayaa sidoo kale imaanaya, xilli inta badan Xildhibaannada mucaaradka ah, hore u dal badeen in Villa Hargeysa, laga raro kulamada Golaha inta laga dooranayo Madaxweynaha.
Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka ayaa dhacaysa, Arbacada oo ku beegan 27-ka April 2022, waxaana shalay la soo gabagabeyay dhageysiga khudbadaha Musharixiinta u tartamaya kurasta ugu sarreysa Aqalka hoose.